Hery Rajaonarimampianina : Nanotrona ny fandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Nanotrona ny fandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert
24/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tonga nanatrika ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ny rain’ny demokrasia, izay tsy iza fa ny profesora Zafy Albert ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tany Betsiaka ny sabotsy teo, taorian’ny iraka izay notontosaina tatsy Roma. Avy hatrany moa dia nivantana tany amin’ny fandevenana ny filoham-pirenena mivady sy ireo delegasionina manokana izay niaraka taminy, ary nitafa mivantana ihany koa tamin’ny vadin’ny profesora, Thérèse zafy. Nambaran’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’izany fa “fakan-tahaka ny profesora tamin’ ny fahavelony, ohatra iray velona amin’izany, na teo amin’ny sehatry ny asa, na teo amin’ny sehatry ny politika”. Izay no anisan’ny fandraisam-pitenenana izay nataon’ny filoham-pirenena nandritra ny lamesa fanaovam-beloma ny nofo mangatsiakan’ny profesora. Very olomanga tokoa ny firenena malagasy hoy hatrany ny filoham-pirenena malagasy “ ho tsaroantsika hatrany ny profesora, izay sady mpanao politika manana ny toerany ity. Rain’ny demokrasia sy ny fampihavanana. Olom-panjakana izay manana toetra tsotra saingy hentitra kosa” hoy hatrany ny filoha nanipika ny toetran’ny profesora Zafy Albert.
Ny tenin’ny soratra masina izay nalaina tao amin’ ny evanjelin’ny olomasina, tao amin’ny Jaona no nangalana ohatra tamin’ny toetran’ny profesora Zafy Albert. Nampatsiahivin’ny arseveka Marc Ramaroson, fa ny fampianarana izay azony tao amin’ ny sekoly katolika no namefy aza nandritra ny fiainana iray manontolo. “ Ray aman-dreny izay nametraka lova tsara ho antsika teto amin’ny fiainany ny profesora” hoy hatrany ny fanamarihana izay nataon’ ny arsevekan’Antsiranana. Taorian’ny fanompoam-pivavahana moa dia nisy ny fomba miaramila izay notanterahina ho fanomezam-boninahitra ny profesora amin’ny filoham-pirenena teo aloha azy, alohan’ny nametrahana ny nofo mangatsiakan’ny profesora tao amin’ny fasan-drazany. Teo ampahatongavana moa dia nitondra ny teny fampaherezana sy ny fiaraha-miory ho an’ny fianakavian’ny mana-manjo ny filoham-pirenena, ary indrindra ny vady navelan’ny profesora, Thérèse Zafy, alohan’ny nanoratany sy nanaovany sonia ny boky fahatsiarovana.Nandritra izany famangiana izany ihany no nitondran’ny fianakavian’ny profesora Zafy Albert ny fisaorana mitafotafo ho an’ny filoham-pirenena tamin’ny fanampiana rehetra izay nomen’ izy ireo , ary tsy hohadinoin’ny fianakaviana ihany koa ny nisaotra ny vahoaka malagasy iray manontolo izay nampiseho hatrany ny fitiavana ny profesora.
Ankehitriny kosa dia efa tafapetraka soa aman-tsara ao ampasan-drazany ny nofo mangatsiakan’ny profesora Zafy Albert izay ao Betsiaka, tanàna izay ahitana olona 1500. Betsiaka moa, izay 30 kilometatra miala ao Ambilobe, eny amin’ny lalam-pirenena faha-5A, izay mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar. Nampiraisin’ny Betsiaka kosa ny lafy valon’ny nosy ny faha- 21n’ny volana oktobra, izay samy nanome voninahitra farany ity ray aman-dreny lehibe ity.
Ho fanatrarana ny vina “Fisandratana 2030”, tsy niandry ela ny Filoham-pirenena amin’ny asa sy andraikitra sahaniny amin’ny fampandrosoana maharitra fa avy hatrany dia nanomboka izany teny Andranofeno Atsimo, amin’ny Lalam-pirenena fahefatra. Nidina teny an-toerana ny ...Tohiny